LaLa 's Llama, Truman Heritage District-Indep Sq - I-Airbnb
LaLa 's Llama, Truman Heritage District-Indep Sq
Independence, Missouri, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Jacquie
U-Jacquie Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elibuyekezwe kahle neligqamile elinezitezi ezisezindaweni eziphakeme ze-Truman Heritage District of Independence. Hamba uye e-Independence Square enezitolo eziningi nezindawo zokudlela eziyingqayizivele. U-LaLa wayengumama wami. Ngifake lawa mafulethi nezinto zakhe noma izinto anginike zona kanye nokufaka izinto ezintsha. Le triplex kanye nezingadi zayo, iyindlu yomndeni futhi inezinkumbulo eziningi.
Siyabamukela bonke... basebenzisane. Umgomo wethu ukukwenza uzizwe ukhululekile futhi usekhaya. Ifulethi elingu-550 sqft elinomhlobiso wesimanje, wendabuko noKrestu. Izwakala ithokomele, ikhanya futhi ifudumele. Kulungele ukuqasha kwezinkampani, isikhashana noma izivakashi ezivakashayo futhi ezidinga isisekelo endaweni ye-Independence/Kansas City. I-Arrowhead ne-Kaufman ziseduze. I-Downtown ne-KCI yindlela elula yokuhamba.
Ukungena ngaphandle kwesikhiye. Uzothola ikhodi yakho ngemva kokuqinisekiswa kokubhukha kwakho futhi siyakwazi ukukhuluma.
I-Keurig inikezwe kanye nekhofi le-K-Cup netiye ukuze uqalise. Izinkomishi ezilahlwayo zokuya zihlinzekwa ngalolo suku ekuseni olwedlule...ungase ube nekhofi lakho ukuze uhambe futhi kungadingeki ukuthi uthathe/ukhulule inkomishi yobumba.
Ikhishi lizodlula konke okulindelekile. Izinto ezisetshenziswayo zonke zisha ze-Whirlpool engagqwali. Umshini wokuwasha izitsha unangaphakathi engagqwali nezinga lomsindo elingaphansi kuka-50db. Umgodi wamanzi we-Brita Stream ohlinzekwa esiqandisini. Sicela ungasethi kabusha ikhawunta yokuhlunga ye-elekthronikhi ye-Brita; sebenzisa nje bese ugcwalisa kabusha. I-microwave kanye nohhavini ohlukahlukene kunamakhono e-convection kanye nezici eziningi kunalokho ezingafakwa ohlwini. Indawo yokuphekela yengilazi ehlanzekile elula. Ukulawulwa kwe-elekthronikhi kungahlelelwa iSpanishi/isiFulentshi ngaphezu kwesiNgisi esizenzakalelayo. Ungasebenzisi isici sokuhlanza uhhavini. Imibono itusa ukusebenzisa leso sici kancane. Izindawo eziphezulu ze-granite, i-backsplash travertine, usinki i-granite ehlanganisiwe enetephu engagqwali ye-Moen. Umpheki werayisi. I-toaster engu-4. Isethingi yendawo yokugeza izitsha yabantu abane. Izindwangu zokusula izandla zokudla okukhethekile ekudleni.
Indawo yokuhlala eseduze nendawo yokudlela. Usofa wesikhumba wehlelo we-L. Umabonakude onamashaneli e-Xfinity40 +. Indawo yokuhlala enefenisha enesitayela sesimanje semvelo, sekhulu leminyaka. Udonga olufaselwe i-tapestry yase-India engiluthole kolunye lwami Uhambo Lomhlaba.
Ikamelo lokulala linefenisha yendabuko yombhede wensimbi, isibani sangaphansi se-antique floral kanye ne-antique wood/i-marble topped dresser. Izinto zombhede ziyi-comforter ephansi eneduvethi kanye namashidi ekhwalithi ephezulu. Umshini wokuphephetha umoya oxhunywe kusilingi/ukulungiswa kokukhanya. Isembozo sefasitela esine- eceleni kwe-remote control. Eceleni kombhede kunomshini wokuvikela ugesi/wokudlondlobala onezindawo zokuphuma ezengeziwe nokushaja. Umshini wokuwasha/wokomisa ohlanganyelwayo utholakala endizeni eyodwa yezinyathelo eziya ezingeni eliphansi lesakhiwo.
Ishawa kuphela (akukho ubhavu) enamathayili asophahleni kanye nengilazi enhle yeshawa engenawo amafreyimu. Kubuyekezwe ngokuphelele ngendlu yangasese entsha kanye ne-quartz vanity top and new vanity. I-Chi blow dryer inikezwa kanye ne-Neutrogena Body Wash and Salon Quality Sulfate Free Shampoo/conditioner ukuze uyisebenzise ngenkathi uyisivakashi sethu...sicela ungapakishi. Izinto zangasese/izimpahla zephepha/ezisebenzisekayo zinikezwa kuphela ekuqaleni
Itafula le-gazebo ne-bistro kanye ne-Char-Broil 2 burner propane BBQ grill egcekeni elingemuva. Ngemva kokusebenzisa i-grill sicela uqinisekise ukuthi i-propane icinyiwe, sebenzisa ibhulashi le-wire ukuhlanza i-grill futhi uma sekupholile ukufaka isembozo. Esikhathini sonyaka kunamaphepha namakhaza ongawakhetha futhi uwasebenzise.
Indawo eyodwa yokupaka ekhethiwe (engafihliwe) ngemuva kwesakhiwo se-triplex. Sebenzisa indawo yokungena ye-alley ngaphandle kwe-Farmer St. Indawo yokupaka ekhethiwe iyindawo esenyakatho kakhulu eduze kwenqolobane emhlophe/ukuchitheka. Inkundla yomdlalo webhola lomphebezo, vele uhambe enyakatho eceleni komgwaqo futhi udlule emakhaya angu-3. Ngaphezu kwalokho kukhona i-McCoy Park enesici esijabulisayo samanzi asehlobo sabantu abasebasha enhliziyweni nasemabhodleleni ezicathulo zamahhashi. I-Independence Square ibanga elihanjwa ngezinyawo, kodwa maningi amathuba okuthi uzoshayela futhi kukhona mahhala futhi kuningi okuseduze nokupaka kwezindawo zokudlela eziningi, izitolo nemidlalo yaseshashalazini. Bheka i- ‘Truman Heritage District' kuzo zonke izinto ongazenza endaweni yangakithi.
Ama-McClains angumndeni wendawo otsale imali engaphezu kwezigidi ezingu- $ 25 ku-Independence Square futhi usanda kwenza indawo yethu encane ibe yindawo ejabulisayo yokuthenga kanye nokudla okumnandi e-Yougurtini noma e-Clinton 's Soda Fountain, ikhofi e-Mainstreet Coffee House, kanye ne-pizza yase-Square Pizza, enhle yase-Italy e-Cafe Verona, i-Continental e-Ophelia' s, i-Mexican e-El Pico, i-Melika yendabuko e-Courthouse Exchange kanye nezinja ezinhle kakhulu zokudla okuconsisa amathe e-UpDog. Uma uthambekele kakhulu ungase ube nobhiya nesitsha e-Dalley noma umbukiso esikrinini esikhulu e-Phoenix Theatre. (Shayela amabhizinisi ucingo ukuze uqinisekise ukuthi avuliwe, amaningi anamahora amancane noma avaliwe okwesikhashana ngenxa ye-COVID.)
Ngokuqasha Kwanyanga zonke, kuzonikezwa ukuhlanza okufinyelelwe ngamahora angu-3. Ukuhlanza izitsha nokukhishwa kukadoti kuyisibopho sesivakashi.
Igceke elingemuva Okwabelwene ngako – Ayinalo uthango oluphelele
4.92 · 26 okushiwo abanye
Itholakala emlandweni ocebile, i-Truman Heritage District. Umgwaqo owodwa ngaphesheya kwezakhiwo ezimbili enyakatho usuka e-Truman Home. Umtapo Wezincwadi we-Truman uhamba ngemizuzu engu-10 eNyakatho. Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya e-Independence Square nezindawo zokudlela ezinhle nezehlukile nezitolo zeqembu le-McClain.
Ngihlala eNyakatho ye-Missouri River e-Holt, MO; cishe ihora. Ngingathanda ukuhlangana nawe uma ngitholakala. Nginelinye ikhaya e-Richmond, VA lapho ngizama khona ukuchitha isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka.
Uma kwenzeka ngihambile nginomsizi, uLaura. Wakhuliswa endlini yezitini ngaphesheya komgwaqo lapho abazali bakhe behlala khona. Mina noLaura besilokhu sibungaza ndawonye kusukela saqala nge-Airbnb ngo-February 2018.
Ngihlala eNyakatho ye-Missouri River e-Holt, MO; cishe ihora. Ngingathanda ukuhlangana nawe uma ngitholakala. Nginelinye ikhaya e-Richmond, VA lapho ngizama khona ukuchitha isikh…
UJacquie Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Independence namaphethelo